Semalt Sure Surefire लीड जेनेसन अवधारणाको अनावरण गर्दछ
डिजिटल मार्केटिंग अभियानहरूले व्यापारको लागि नेतृत्व लिन सहयोग गर्दछ। यो सजिलो कार्य होइन र यसलाई सहि बनाउन र आउटपुट अधिकतम बनाउन केही समायोजन लिन्छ। सबै उच्च गुणवत्ता सीसाको रूपान्तरण क्षमता छ। यसको मतलब मानिसहरूलाई वेबसाइटमा आकर्षण गर्नु र उनीहरूलाई तपाइँको बेच्ने कुरामा मूल्य फेला पार्ने आशामा उनीहरूलाई जानकारी दिनको लागि विश्वस्त पार्नु हो।
भाग्यवस मार्केटरहरूका लागि, त्यहाँ तरिकाहरू छन् जुन उनीहरूले तिनीहरूको गुणवत्ता बढाउन सक्छन्।
Semalt ग्राहक सफलता को निर्देशक माइकल ब्राउन गरीब उत्पादन रणनीति को कारण कम रूपान्तरण दर संग मानिसहरूलाई सल्लाह:
१. ठूला सामग्री उत्पाद
सामग्री व्यवसाय को सर्वोपरि महत्त्वको छ। क्वालिटी लीडहरू उत्पन्न गर्न, एउटा मार्केटरमा राम्रो सामग्री हुनुपर्दछ, किनभने यो त्यस्तो सामग्री हो जुन उपभोक्ताहरूलाई पहिलो स्थानमा साइटमा आकर्षित गर्दछ। यसको शीर्षमा, यो परम्परागत मार्केटिंग भन्दा %२% कम खर्चिलो छ र तीन गुणा बढी लीडहरू उत्पन्न गर्दछ। त्यसो भए पनि, यो कार्य गर्न रणनीतिको लागि लक्षित दर्शकहरू लिन्छ। लक्षित दर्शकहरूले मानिसहरूलाई पीडा पोइन्टहरू पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ, त्यसपछि समाधानहरूको रूपरेखा गर्दछ र आगन्तुकहरूलाई कार्य गर्न प्रेरित गर्दछ।
२. ध्यानयुक्त सामग्री वितरण गर्नुहोस्
राम्रो वितरण रणनीति बिना, सामग्री सिर्जना गर्न सबै प्रयासहरू खेर जानेछन्। लक्ष्य भनेको सबै सम्भावित ग्राहकहरूलाई सामग्री फेला पार्न र जानबूझकर यससँग कसरी व्यवहार गर्ने सिक्नु हो।
उत्तम विचार पर्दा पछाडि विपणन र खोज इञ्जिन अनुकूलन (SEM र SEO) गर्नु हो। अर्गानिक वेबसाइट ट्राफिक फर्मस्टेकको नेतृत्व क्याप्चर स्थिति अनुसार उच्च गुणस्तरको मुख्य स्रोतहरू मध्ये एक हो। SEO र SEM मा पर्याप्त ध्यान दिँदा ग्राहकहरूले सामग्री खोज्नको लागि कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ। थप रूपमा, लक्षित श्रोताको लागि सान्दर्भिक सामाजिक मिडिया खाताहरू समावेशीकरण महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले उनीहरूलाई सामरिक रूपमा सामग्री साझा गर्न अनुमति दिन्छ।
Content. मोबाइलका लागि उपयुक्त सामग्री फारामहरू
एक पटक प्रयोगकर्ताहरू साइटमा पुग्छन्, लक्ष्य तिनीहरूलाई रूपान्तरण गर्न हो। रूपान्तरणको अर्थ भनेको ग्राहकहरू अनलाइन फारम मार्फत उनीहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्छन्। मोबाइल फोनको बढेको प्रयोगलाई उच्च रूपान्तरण दर कायम राख्न मोबाइल-मैत्री फारमहरू डिजाइन गर्न अनलाइन मार्केटर्सको आवश्यकता पर्दछ। मोबाइल फारमहरू अनुकूलनको लागि सानो स्क्रीनहरूमा तिनीहरूको उपस्थिति जाँच्न समावेश छ। प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको मोबाइल उपकरणहरूमा फारमहरू भर्न कुनै समस्या हुँदैन। इनपुट जोनहरू पर्दामा विस्तार हुनुपर्दछ, स्क्रोलि the न्यूनतम र कम से कम कलमा रहनुपर्दछ स्पष्टताको साथ इच्छित कार्यको लागि।
Mon. प्रदर्शन प्रदर्शन गर्नुहोस्
एक खरीददारका लागि, काम कहिले समाप्त हुँदैन किनकि यसको लागि निरन्तर परिष्कार आवश्यक पर्दछ। गुगल एनालिटिक्सको साथ वेबसाइट प्रदर्शन ट्र्याकिंग जो मार्केटिंग को प्रयास काम गरीरहेको निर्धारण मद्दत गर्दछ। तसर्थ, तिनीहरूलाई अनुकूलन र स्केलिंग गरेर, मार्केटिंगको लाभ यी प्रयासहरू मार्फत बढाइन्छ। फार्महरूमा भएको जानकारीले अवरोधहरू र मार्केटिंग प्रभावकारिता र रूपान्तरणको लागि सम्भावित अवरोधहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ।
एक रणनीति जसले एक निश्चित कम्पनीको लागि नेतृत्व र कार्यहरू उत्पन्न गर्दछ तबसम्म प्रभावकारी रहन्छ जबसम्म यसले साइटमा ग्राहकहरूलाई मूल्यवान सामग्रीमा आकर्षित गर्दछ। जब मार्केटरले एक अनुकूलित फारम प्रयोग गर्दछ, तिनीहरूले सम्भावित रूपान्तरणको कम्पनीलाई आश्वासन दिन्छन्। अन्तमा, लगातार डाटा अनुगमनले प्रयासहरूलाई परिष्कृत गर्न र गुणस्तरको सम्भावना सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।